လေနုအေး: ကျွန်တော်ပြောချင်သော ပန်းပွင့်လေးများအကြောင်း
Posted by တန်ခူး at 9:08 PM
အမ တူတူပဲ.. ကျနော်လည်း ကျောင်းတက်တုန်းက မိန်းကလေးလှလှလေးတွေ ဆို ငေးနေတာ..
သယ်ချင်းတွေက တောင်ပြောတယ်။ ငါတို့ကြည့်ဖို့လဲ ချန်ဦးတဲ့..။ ဟီးးး
အမ.. ဆရာမ က ချောတယ်..။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်နဲ့တွေ့တော့ အတော်လေး ဝ နေတယ်..။ သူနဲ့ ကျနော် survey test မှာ ရန်ဖြစ်တယ်။
ကျနော်ကို့ လာအော်လို့..။ ကျနော်ကလဲ ရွတ်ပီး ဘာမှ ဆက်မလုပ်တော့ဘူး..။ နောက် ကျောင်းပီးမှ ပြန်တည့်သွားတာ ဆရာမနဲ့ ..။ သူက ကျူတိုရီရယ် နဲ့ ပရက်တီကယ်မှာပဲ သင်ခဲ့ရတာကိုး..။
နောက်ဂျပန်သွားတယ်..။ ပြန်လာတော့ တီချယ်က ပိန်သွားတယ်..။ တီချယ့်သမီးလေးကလ ချောလိုက်တာမှ မွှတ်နေတာပဲ..။ အရမ်းထွားတယ်..။ အခြားတီချယ်တယောက်ရဲ့ အလှူမှာ တွေ့တာ..။
အမ ..တီချယ် သနားပါတယ်..။ ယောင်္ကျားတွေ မကောင်းဘူးးး... နောက်မှ အမကို ပြောပြမယ်..။
ဒီမှာ ပြောလို့ မကောင်း။ ဟီးးးး
အမ ထခုထပ်လာပြောတာ..ကျနော်လေ ဆရာချောရင်လဲ မလွှတ်ဘူး ငန်းတာ.. အမသိလားး အီးစီကလား အီးပီကလားသိဘူး ဆရာအရမ်းချောတယ်.. ကျနော်က ရဲကိုကို လို့ နာမည်ပေးထားတယ်..အဲ့ဆရာ ဆို လိုက်ချောင်းရတာ အမော..။ ပီးတော့ အတန်းထဲမှာ ဆရာမ ဒေါ်စန္ဒာချိန်ဆို မလွတ်တန်းပဲ ဖြူဖြူ တောင့်တောင့် ဖြောင့်ဖြောင့် ချောလိုက်တာ...။ သူဝတ်တဲ့ နားကပ် လည်ဆွဲ ရင်ထိုးကအစ မလွတ်စေရဘူး ငန်းတာ..။ နောက် ဒေါက်တာနီလာဝင်း ဆိုလဲ .. သူလဲ ဂျပန်ပြန် သူ့စတိုင်ကို ကြိုက်ပေမဲ့ မလှဘူးးး ဟီးး အမ သိချင်မှ သိမှာပါ။ အားလုံးက မြို့ပြ ကကိုးး
အစ်ကိုကြီးရေ လွတ်စေလို့သာ ပြောလိုက်ပါ။
သူ့ခမျာ ဖုံးရ ဖိရ
အင်း ခက်ပါတယ် ကလေးများ.....
ဆူးကြားက ဘူးသခွားမို့လား မသိ ဖတ်လို့ကောင်းပါ၏
i will kill u လူမိုက်ကြီး ဘာများ ပြောဦးမလဲ သိချင်လျက်
ဟိ မမလဲ လူလည်ကျပြီး ရေးတယ်။
ကျွန်မကတော့ ၉ တန်းနှစ်က RIT Calendar မှာ စမြင်ဖူးတဲ့ Archi က ချောကလျာ ကို ခုထိ စွဲနေတုန်းပဲ။ နောက် အလုပ်ဝင်တော့ သူ့အမျိုးသား အလုပ်နဲ့ field ချင်းတူတဲ့ partner company မှာ ဆိုတော့ သူ့အကြောင်းတွေ အမြဲနားစွင့်နေမိတယ်။ Cardiff မှာ စကောလားရှစ်ပ် နဲ့ Master သွားတက်တာတို့ ဘာတို့ပေါ့။
MES က လုပ်တဲ့ seminar တွေမှာတောင် ဘာမှ မဆိုင်ဘဲ သူ့ lecture တွေသွားနားထောင်ဖို့ လုပ်သေးတာ။ အကြောင်းကြောင်းနဲ့ မတက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။
ငယ်ငယ်က သူ့ကြည့်ပြီး သူ့လို ချောချောလှလှ အာခီတက် ဖြစ်ချင်ခဲ့ဖူးတယ်။
ရွာသား ပစ်တာတခြား ထိတာတခြားတော့ ဖြစ်ကုန်ပြီ ထင်တယ်။
အတူတူချင်းတောင် မချန်ဘူး။ :)
ဟားဟား.. တန်ခူးရေးထားတာလေးက ချစ်ဖို့ စွဲလမ်းဖို့ ကောင်းလိုက်တာ.. မနှောင်းခင်ခင်ကိုတော့ မသိဘူးတော့..ကျန်တာ အကုန်သိတယ်.. မအေမာကိုလည်း ငေးဖူးတာကိုး..Leg chain ပျော့ပျော့လေးကိုတောင် မြင်ယောင်မိသေးတော့..။ တို့တွေ အဆောင်မှာ ရိုးကောလ်ခေါ်တဲ့ ဟောကျုတာ မမီမီချန်းကိုလည်း သိပ်ချစ်... ဟုတ်တယ်.. ပန်းလေးတွေ အများကြီးကို ငေးမောရင်း သဘောကျဖူးတယ်..နံမယ်ရင်းတွေနဲ့ ရေးထားလို့ သဘောတွေကျသွားတယ် တန်ခူးရေ.. ရွှေသွေးဆီ ဒီပို့စ်လေး မေးလ်ပို့လိုက်မယ်နော်..:)
တူတူပဲ မ-ရေ ..
မ-နဲ့ မြတ်နိုးလိုပဲ မေလဲ မိန်းမချောလေးတွေဆို ငမ်းရတာ အမောပဲ။ တခါတလေ ကျောင်းသွားရင်း ဘတ်စ်ပေါ်မှာ ကောင်မလေးချောချောလေးတွေတွေ့ရင် ရုပ်ကလေးက ချောချောလေးနဲ့ ဘတ်စ်ကားတိုးစီးနေရတာကို သနားတောင် သနားမိသေး။
မ-လိုတော့ မှတ်မထားမိဘူး။ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်သွားပြီ။ မိန်းမချောလေးတွေကို ပန်းပွင့်လေးတွေနဲ့ တင်စားတာ အမှန်ဆုံးပဲ။ ပန်းဆိုတာ အချိန်တန်ရင် နွမ်းရသလို ... အလှဆိုတာလဲ တည်မြဲတဲ့အရာ မဟုတ်ဘူးနော်။ မင်းသမီးတွေ ဘယ်လောက်လှလှ အသက်ကြီးသွားတော့လဲ အလှတွေပျက်ကုန်တာပဲ။ တရားကျစရာ။
မသက်သက်ဆွေလဲ မိုက်တယ်လေ . . .
မ- အဲလို မလုပ်နဲ့လေ.. ကိုယ်ပိုင် ပန်းပွင့် လည်း မပါဘူး။ ရေးလို့ရပါတယ်။း)
ခင်မြို့ ပြ said...
Dr. နီလာဝင်းက ဂျပန်ပြန် မဟုတ်ပါဘူး ဒေါ်မြတ်နိုးရေ may be from Belgium . . . ဒေါ်စန္ဒာက ဝတ်ထားတာတွေက ပိုလှတာ မဟုတ်ဘူးလားဟင် . . .
ဟုတ်လား ဒေါက်တာနီလာဝင်းက သိပ်မလှသလို သူစာသင်တာမကြိုက်လို့
မြို့ပြခင်လေး ဆို လှမယ်။။
ကျွန်တော်လည်း အမနဲ့တူတယ်.. ပန်းတွေမြင်ရင်ချစ်တတ်လို့... အရင်တုန်းကပါ။
အာစီတူးမှာတက်တုန်းက ပန်းတွေများလွန်းလို့ အမလို နာမည်တွေတောင် မမှတ်မိတော့ဘူး :P
မတန်ခူးဆိုတဲ့ ပန်းကလေးအကြောင်းရော ပါဘူးလား အမ။ :))
တန်ခူးရေးထားတာလေး ဖတ်ပြီး အဲဒီ မမတွေနဲ့အတူ ကျောင်းတက်ချိန်တွေရယ် LCR ရယ်ကို လွမ်းသွားတယ်...
(ကိုယ့်ကို တချိန်လုံး လူမိုက်လို့ခေါ် ခေါ်နေတဲ့ အကောင်ကလေးကို ထုသတ်လိုက်ပါ...)
ဒေါ်မြတ်နိုးက အလှကြိုက်တော့ ကိုယ်တိုင်ရော မတန်ခူးရေးသလို ပန်းတပွင့်ပဲလား ဟင် ??
မယ်ကုဝဏ်က အဘခေါ်ရတဲ့ ရုပ်လေးပါကွယ်..။
မြတ်နိုးရေ… တူတယ်နော်… တို့ ညီမတွေ… အမကြီးကျောင်းမှာ ပြန်လုပ်နေတာ မြတ်နိုးပြောမှ သိတော့တယ်… ဒီတခါပြန်ရင် သွားငမ်းဦးမှ…
ပန်ရေ… အပြင်မှာ ဒီထက် ပိုချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ပန်းလေးတွေပါ…
ဟယ်… မြတ်နိုးရယ်… အဲဒါဆရာဦးဇော်မင်းအောင်များ ဖြစ်နေပါဦးမယ်… မြတ်နိုးပြောတဲ့ ဆရာမတွေ မသိဘူးတော့…
ရွာသားလေးရေ… မဖုံးရ မဖိရပါလားကွယ်… ဒါအမှန်တွေပါပဲ…
ညီမရေ… နောက်ကြောင်းမရှိပါဘူး ညီမရယ်… ဒီက ရိုးရိုးလေးပါနော်…
ညီမရီတာရေ… ချောကလျာကို အမမှီလိုက်တယ်… အမတို့ ဖိုင်နယ်မှာ သူက ပထမနှစ်လေ…
သူတို့ က လိုက်ငေးရတဲ့ ညီမငယ်လေးတွေပေါ့….
မ ရေ… မနှောင်းက ကျွန်မတို့ပထမနှစ်မှာ နောက်ဆုံးနှစ်… မမီမီချန်းကို မမှတ်မိဘူး…လူတွေ့ ရင်တော့ မှတ်မိမယ်ထင်တယ်… မ၀င်းရွှေသွေးနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်လား… ရတယ်မ… ပို့ လိုက်နော်…သူက တန်ခူးဘယ်သူလဲလို့တွေးနေလိမ့်မယ်… တွေ့ ရင် အမြဲရယ်ပြတဲ့ကောင်မလေးပါလို့ ပြောပြလိုက်နော်…
မေရေ… အမက အဲဒီအကျင့်မပျောက်သေးလို့ခုချိန်ထိ အမျိုးသားက သတိပေးနေရတုန်း…ဟိဟိ… ဟုတ်ပါ့မေရေ… အမတို့ ခေတ်က မေသန်းနုဆို အခု အမေခန်းဖြစ်နေပြီလေ…
ညီမရွှေခိုင်ရေ… ဟုတ်တာပေါ့… မသက်သက်ဆွေလဲ အရမ်းချော….
ကေရေ… ကြောက်ကြောက်… ကိုယ်ပိုင်ပန်းပွင့်လား… တပွင့်ထဲပန်သူပါကွယ်…
ညီမခင်မြို့ ပြရေ… အမကတော့ ၂ယောက်လုံးမသိဘူးလေ…
သယ်ရင်းမိုးနီလာရေ… သတင်းလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးနော်… မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ရင် ကျောင်းထဲသွားငမ်းဦးမယ်…
ကိုပီတိရေ… အာစီတူးကတော့ မိန်းမလှကျွန်းလေ… မြင်မြင်သမျှအကုန်လှလှလေးတွေပဲနော်…
မတန်ခူးက ပန်းလိုမှ မလှတာ ချိုသင်းရေ… နေ့ လည်ကတောင် သတိရနေသေးတာ….
သက်ဝေရေ… ဟုတ်ပါ့… တို့ တွေက ကောင်လေးတွေလို လိုက်ရှာနေစရာမလိုဘူး…. LCRထဲဝင်လာတဲ့ အမကြီးတွေကို အလှည့်ကျ ထိုင်ငမ်းနေရုံပဲ… မိုက်တယ်နော်… အဲဒီကောင်လေးကို ထုသတ်ဖို့ ရာ အရင်မြင်ဖူးဦးမှလေ… နို့ မို့ လူမှားသတ်မိနေဦးမယ်…
မခင်မြို့ ပြနဲ့ မြတ်နိုးရေ… တတန်းထဲသူငယ်ချင်းအရင်းတွေထင်ပါ့….
တန်ခူးကိုလဲ ပန်းတစ်ပွင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသူတွေ ရှိမယ်ထင်ရဲ့နော် ...
တန်ခူးရဲ့ ပန်းတွေအကြောင်းကိုယ့်အိမ်ကလူကိုပြောပြတော့ ... အမယ် ... သူက တန်ခူးပြောတာ မှန်သတဲ့ ... ဆိုပြီး ထပ်ဆက်နေသေးတယ် ...နောက်တော့ သူလဲ ဗိုက်ခေါက်နာသွားတယ် ...
အော် ... မိန်းမတွေ ... မိန်းမတွေ ...
မယ်တော်ကြီး လေးပါးလို့ နာမည်ကြီး ပန်းလေးပွင့်ကိုဘာလို့ချန်ထားတာလဲ။ သိင်္ဂီမင်းညို၊ မကေသီနှင်း၊ ...........